Uhla lwemibhalo lweWebhusayithi, Uhla lwebhizinisi, Uhlu Lwesikhombi Samahhala Samawebhusayithi
Lona uhlu lwemikhombandlela yebhizinisi, lapho ungahambisa khona iwebhusayithi yakho ukuyifaka kuhlu ngaphansi kwesigaba noma isigaba esincane. Lona lwemibhalo Mahhala Iwebhusayithi Ukufakwa ohlwini elikuvumela ukuba uthumele kuwebhusayithi yakho nge-Google, Ilogo, Ulwazi, RSS Izimali, njll
I Ukufakwa ohlwini kuhlanganisa zonke izinhlobo zebhizinisi ukuthi abantu babengase ngifuna futhi omunye elula futhi ngempumelelo izindlela zokuthola ezingaba amaklayenti ebhizinisini lakho.
Izigaba nezigaba ezingezansi
A B C UD
Mina UJ K
I-TV - Umsakazo
Imfashini - Izipho
Akukho - Inzuzo
Uhla lwemibhalo lwewebhusayithi yebhizinisi
Umkhombandlela weWebhusayithi Webhusayithi ubhekisa ngqo ebhizinisini elihlobene nokuhlinzeka ngezinsizakalo nokuthengisa imikhiqizo. Lokhu kufaka phakathi izinsizakalo zokulungisa amakhompiyutha, izinsiza zokwakha iwebhusayithi, izinsizakalo ze-SEO, izinsizakalo zezimoto, amakhono wokufaka amakhodi olimi, abahlinzeki bezinsizakalo ze-SEM, njll
. Uhlu lufaka phakathi ibhizinisi elidume kakhulu ongalifuna ngokuzihlunga ngokususelwa esifundeni sakho ukuze uthole uchwepheshe ofanele .
Le yingxenye ebalulekile yokukhangisa nokwazisa iwebhusayithi yakho. Ukuba ngenye yezinjini ezinkulu zokusesha, iGoogle ithathwa njengenjini yokusesha ehamba phambili yokunikeza imiphumela yokucinga efanele izivakashi. Ngaphandle kokulandela i-algorithm eyindida kakhulu ukuthola izinga lewebhusayithi, iGoogle iphinde inikeze abanikazi bewebhusayithi ukwenza imikhankaso yezikhangiso zeGoogle. Le yindlela yokukhangisa online futhi ibizwa ngokuthi ukukhangisa okukhokhelwayo.
Ngohlu lwethu lwebhizinisi, uyakwazi ukuthola ababonisi abangakusiza ngemikhankaso yezikhangiso ze-Google, ukhethe amagama angukhiye afanele futhi uphromothe iwebhusayithi yakho ngendlela esebenza kahle kakhulu.
I-BING ingenye yezinjini ezinkulu zokusesha, ezinikwa amandla yiMicrosoft. Ingenye yezinjini zokusesha ezithandwa kakhulu namawebhusayithi enza imizamo yokubeka phezulu kule njini yokusesha futhi.
Manje, njengoba sazi ukuthi zonke izinjini zokusesha zilandela isethi ethile yezinqubomgomo noma i-algorithm ukwabela ukubekwa kwezinga kunoma iyiphi iwebhusayithi, kubalulekile ukuthi iwebhusayithi yakho izifeze zonke. Sinabachwepheshe noma amabhizinisi afakwe ohlwini lwemibhalo yethu angakusiza ukwandise iwebhusayithi yakho futhi uyenze ifanele izinjini zokusesha futhi uthole ukukleliswa kwakho okuphezulu.
I-Wikipedia iyi-encyclopaedia eku-inthanethi yamahhala ekunikeza imininingwane cishe nganoma yini. I-Wikipedia idala ikhasi elihlukile cishe lakho konke ongakusesha. Imininingwane esemakhasini e-Wikipedia yenziwa noma yahlelwa ngamavolontiya emhlabeni wonke.
Lolu hlu lwemikhombandlela aluyona nje indlela yokuhambisa iwebhusayithi yakho ngezigaba nezigaba ezingaphansi ukuze uthole amakhasimende angaba khona ebhizinisini lakho, kepha ungathola nohlu lwamabhizinisi nochwepheshe abangakusiza ukuthi uphumelele futhi.
Thumela Uhlu Lwewebhusayithi kuMkhombandlela
Thumela ukufakwa kuhlu kwewebhusayithi esigabeni osifunayo kanye nesigaba esincane ngemifanekiso, imininingwane ...
© 2020 Wonke Amalungelo Agodliwe,Inqubomgomo Yemfihlo Nemigomo